Anna iyo Lars oo noqday magacyada ugu caansan oo carruurta loo bixiyo - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Lars-Åke Wilhelmsson iyo Anna Sahlin oo magacyadoodu yihiin kuwa ugu caansan oo carruurta loo bixiyo Iswiidhen. Sawirle: Bertil Ericson iyo Claudio Bresciani / TT Sawirqaabeyn: Linn Fogelberg/SR
Anna iyo Lars oo noqday magacyada ugu caansan oo carruurta loo bixiyo
La daabacay torsdag 20 februari 2014 kl 14.22
Magacyada ugu caansan oo ay dadka iswiidhishku carruurta u la baxaan ayaa weli ah Anna iyo Lars. Magaca Anna oo gabdhaha loo bixiyo ayaa waqti dheer soo ahaa magaca liiska ugu horreeya, halka uu Lars liiska soo galay sannadkii 2001, weli ku jiro.
Haddii la isku geeyo dhammaan magacyada carruurta loo bixiyo waxay labadaan macallin gelayaan kaalinta saddexaad. Liiska magacyada magaca hore lagu lammaaniyo waxaa ugu horreeya Maria iyo Karl, sida laga soo xigtay xafiiska tirakoobka guud ee SCB.
Dhanka magacyada qoyska magaca Andersson ayaa kaalintii koowaad ka qaaday magaca Johansson. Waxayna labadaan magac isbeddeleen sannadkii 2012, kolkaas oo magaca Andersson uu noqday magaca ay haystaan tiro ka badan tirada haysata magaca Johansson.
Laba magac oo qoys ayaa sannadkii hore liiska soo galay oo hadda ka mid ah boqolka magac qoys oo ug caansan. Labadaas magac ayaa kala Ali oo kaalin 81aad galay iyo Mohamed oo galay booska 83aad.